Izhevsk State University Technical - Fianarana Engineering in Rosia
Izhevsk State University Technical
Izhevsk State University Technical Details
fanafohezan-teny : IHANY
Créé : 1952
mpianatra (eo ho eo.) : 20000
Aza adino ny iaraho midinika ny Izhevsk State University Technical
Izhevsk misoratra anarana ao amin'ny Technical State University
Kalashnikov Izhevsk State University Technical naorina tao 1952 ao amin'ny vanim-potoana ny mafy indostria fampandrosoana ny fony mbola nisy ny fitomboan'ny tinady ao amin'ny tena mahafeno fepetra injeniera, afaka fitantanana dingana famokarana. Tamin'ny ny daty ny 60faha tsingerintaona dia atao hoe taorian'ny malaza endrika fitaovam-piadiana kely Mikhail Kalashnikov.
Amin'izao fotoana izao Kalashnikov ISTU dia mitarika fanabeazana andrim-panjakana ambony any amin'ny faritra ary iray amin'ireo sekoly ara-teknika ny mpitarika ao Rosia, ny foibe fanofanana ny injeniera sy ny ambaratonga ambony.
Kalashnikov Izhevsk State University teknika dia nanao sonia ny Magna Charta Universitatum in Bologna, Italia sy ny mpikambana ao amin'ny Eoropeana feno University Association (USA). 6 licence sy 1 tompon fianarana fandaharan'asa Kalashnikov ISTU no deraina amin'ny Central Evaluation sy fankatoavana Agency ZEvA, Hanovre, Alemaina ny mety mba hamoaka diplaoma iraisam-pirenena fantatra fanampin-tsakafo.
Kalashnikov manana IHANY 5 sampana ao amin'ny tanànan'i Udmurt Repoblika sy ny faritra manodidina, izany hoe: Votkinsk, Sarapul, Glazov, Kambarka sy Tchaikovsky.
Amin'izao fotoana izao dia ahitana ISTU 11 -misaina sy ny 1 Institute, izy ireo dia:
Faculty ny Mechanical Engineering
Institute of Modern Technologies in Mechanical sy Automotive Engineering sy mpampatsiro hanina
Faculty ny Instrumentation Engineering
Faculty ny Computer Science
Faculty ny Management sy ny Marketing
Faculty ny Toekarena, Lalàna sy Humanities
Faculty ny Civil Engineering
Faculty ny Quality Management
Faculty ny Matematika sy Natural Siansa
Faculty ny Heat Engineering
Faculty ny dokam-barotra sy Design
Tikhonov Training Institute ara-batana sy ny Fanatanjahan-tena
Over 760 mpampianatra dia tafiditra ao amin'ny fampianarana dingana, 114 amin'izy ireo dia Doctors ny Siansa sy / na ny Profesora, 379 - Kandidà ny Science (PhD) ary / na ny Associate Profesora.
Kalashnikov ISTU dia mitondra ny lohateny hoe mba hanome fanabeazana tolotra in 49 fandaharana ny licence fampianarana, 38 fandaharana ny tompony fampianarana, 8 specialties ambony matihanina fampianarana, 48 specialties ny PhD sy 18 specialties ny doctorat fampianarana, 16 fandaharana ny fampianarana ambaratonga faharoa matihanina, 1 fandaharana ny fampianarana ambaratonga voalohany matihanina, ary koa ny fandaharana ny fanabeazana fanampiny (fahaiza-manao-taranja vaovao farany sy ny matihanina retraining, fanampiny fahaizana "Professional Mpandika", antokony for te ho mpianatra). Amin'izao fotoana izao Kalashnikov ISTU mampianatra ny 20,000 mpianatra, teo aminy tsy mihoatra noho ny 100 mpianatra iraisam-pirenena. Ny fampianarana sy ny asa fikarohana dia natao in 8 trano, ny vaovao nisokatra tamin'ny 1 Septambra 2009.
Fa ny 60 taona mihoatra noho 65,000 injeniera no niofana tao Kalashnikov ISTU. Misy 9 manokana Academic Filankevitra ho PhD sy DSC diplaoma eto.
Scientific sekoly no nokarakaraina eo amin'ny sehatry ny hery, azo antoka, sarotra automatique, CAD rafitra, informatika, simika teknolojia, fizahan-toetra sarotra milina. Ny anjerimanontolo sekoly ara-tsiansa hitarihana ny ezaka mba hamahana ny olana fototra ny milina-trano, fitaovana fanaovana orinasa, solosaina siansa sy ny tontolo iainana. Mpikaroka ny Kalashnikov ISTU soa aman-mandray anjara amin'ny Grant sy ny manam-pahaizana miaraka amin'ny mpiara-miasa aminy ny fandaharana avy amin'ny mpiara-miasa eo an-toerana sy ny anjerimanontolo na any ivelany.
Ny anjerimanontolo dia manana toerana rehetra ankehitriny mba hanampy ireo mpianatra ao amin'ny fianarana sy ny fikarohana. Over 2,500 PCs sy workstations ny Kalashnikov ISTU dia mitambatra ho ny 80 LANs mifandray amin'ny alalan'ny aterineto ny anjerimanontolo Internet-vavahadin-tserasera.
Ao amin'ny rafitra ny zava-baovao asa ny elektronika Library of Kalashnikov ISTU, fa amin'izao fotoana izao ahitana ny 500,000 anglisy, dia ampiharina ary asa soa aman-tsara. Amin'ny virtoaly laboratoara ny anjerimanontolo tanora manam-pahaizana manokana dia afaka manao fikarohana, ary koa ny fifanakalozana vaovao miaraka amin'ny mpiara-miasa aminy manerana izao tontolo izao amin'ny alalan'ny Internet.
Kalashnikov Izhevsk State University Technical efa foana fampandrosoana ny fifandraisana iraisam-pirenena. Academic fivezivezena fandaharana no ampiharina ary nampirisika.
Mpianatra ao amin'ny oniversite miaina ao amin'ny toeram-pianarana mampahazo aina tranom-bahiny. Fa efa azony ny sakafo sy ny sakafo maivana in canteens hidy napetraka tao amin'ny oniversite trano.
Ara-pahasalamana ho an'ny mpianatra asa sy ny mpiasa dia omen'ny ny anjerimanontolo polyclinic. Ny anjerimanontolo manana ny tobim-pahasalamana ho an'ny 100 olona.
Ny mpianatra manana ny ilaina rehetra ho mandeha ao amin'ny trano ho an'ny fanatanjahan-tena. Ny anjerimanontolo manana kianja, 8 gyms, ny kianja filalaovana tennis sy dobo filomanosana vaovao amin'ny ny ampiasaina. Fa ny mpianatra sy ny mpiasa mba ho tsara sy Mitana sasatra, misy ny oniversite fanatanjahantena toby eo amoron'ny ony Kama.
Misy ihany koa ny Lapan'ny Kolontsaina "manontolo" ny fialam-boly. Izany no toerana ny fihaonambe sy fampirantiana, ary koa ny maro voly fetin'ny. Ny oniversite Municipal Theater "Young Man", ny mpandresy tamin'ny fifaninanana maro sy ny fety, Tena malaza. Ao amin'ny toetra-tranom-bakoka an'i Peter Tchaikovsky in Votkinsk ny ara-kolontsaina sy ny foibem-pampianaran'ny Kalashnikov ISTU efa nanorina.
Production ny milina sy Mechaisms
Fitaovana hafanana sy zavamaniry
Teorika Mechanics sy ny teoria momba ny rafitra sy ny Machines
Nanaovany sy ny teknolojia Fanomanana ny Machine-Building Production
Miasa Metal fiara sy milina
Milina sy ny Teknolojia Metal fiforonana sy Welding Production
Rock Metal Teknolojia sy ny Siansa
Fifandraisana Networks sy Telecommunication Systems
Quality Control Instruments sy teknika
Mandeha ho azy sy Control Processing Data Systems
Accounting sy ara-toekarena Activity Analysis
Finance sy ny Credit
toekarena, Teknolojia sy ny Management in Commerce
Kevitra ny Toekarena
Toekarena sy ny Management
Faculty ny Lalàna sy ny Humanities
Sivily sy Ara-dalàna Lalàna Fitsipika ara-Toekarena Fifandraisana in Industry
Kevitra ny lalàna sy ny fitsipika araka ny lalàna panjakana-
Criminal Lalàna sy Process
Asa Fifandraisana in Industry
History of Rosiana Statesmanship
sosiolojia, Psikolojia sy ny Kolontsaina Fianarana
Siantifika-Technical dikantenin'i Intercultural Communications
Ara-batana Training sy ny Sport
Industrial sy Civil Engineering
Geo-Engineering sy Constructional Fitaovana
Construction sy Road-Building milina
Nanotechnologies sy Microsystem Engineering
Applied Matematika sy ny Informatika
Matematika Modeling ny fomba fiasa sy ny teknolojia
Technologies matematika amin'ny diloilo-ary-Gas Machine-Building
Matematika Support for Information Systems
Physics sy Optical Engineering
Simia sy Chemical Engineering
Heat Supply, fanafanana, Rivotra sy ny Conditioning
Water Supply sy ny Rano Fanomanana
Teknolojia ny Industrial sy artistika Material miasa
Engineering Graphics sy Advertising Teknolojia
Tikhonov Training Institute of ara-batana sy Sports
Biathlon sy Sport Technologies
Izhevsk Mechanical Institute dia nanorina taorian'ny Fanapahan-kevitra ny Filan-kevitry ny Minisitra ny URSS No 1034 mitondra ny datin 'Febroary 22, 1952. Ny fisoratana anarana voalohany tafiditra 200 mpianatra. The Institute ahitana Mechanical (manokana) ary Mechanical ary Teknolojia misaina. Ny voalohany Rector (tale) ny Institute i Vladimir Pavlovich Ostroumov, PhD, Profesora (Dean ny teo aloha ny sekoly ambony ao amin'ny Moscow Higher Technical Sekoly (MHTS), Lohan'ny iray amin'ireo departemanta tranainy indrindra - Teknolojia ny Metaly sy Metal Science).
Ny toerana dia ao amin'ny Institute trano 79 amin'ny Gorky Street. Lakolosy voalohany nomena ho an'ny 100 mpianatry ny taona voalohany avy Nikolay Vassilievitch Vorobyov, DSC, Profesora (a former professor of MHTS). Ny fampianarana dia natao tamin'ny telo specialties.
Tany am-piandohana ny Institute nampiasa ny mety indrindra ny Bauman MHTS, izay nanana traikefa eo amin'ny fanabeazana ny injeniera in Izhevsk (famoahana nandritra ny Ady Lehibe Patriotic), sy ny fotodrafitrasa ny orinasa de la République.
Ny trano famakiam-boky vola hatao nanomboka niforona. Ny loharanom-baovao lehibe ny replenishment dia fanomezam-pahasoavana avy amin'ny Institiota trano famakiam-boky ao amin'ny firenena (Moscow Aviation Institute, Bauman MHTS, Moscow Auto Mechanical Institute, Kazan Aviation Institute). Amin'izao fotoana izao ny trano famakiam-boky ahitana vola ny 800 boky arivo; ny trano famakiam-boky dia mandray ny 1,000 mpamaky isan-taona.
Radio foibe dia naorina. Tamin'ny voalohany dia amoahana ny fanambarana sy ny mozika, Avy eo onjam-peo sy ny gazety ny fandaharana amin'ny radio niseho.
Kilonga Association fanampiana an-tsitrapo ny Tafika, Air Force sy ny tafika an-dranomasina dia naorina.
Ny IMI voalohany Spartakiad nitranga.
Fanorenana ny Hostel No 1 nanomboka in Metallurg District.
Miaramila Department dia naorina.
Mialoha ny fianarana ireo taranja voalamina eo ambany fanaraha-mason'ny Boris Vladimirovich Saushkin, nahazo diplaoma ny MHTS.
Ny fihaonana voalohany ny Mpianatra Scientific nitranga Society.
Trade firaisana ny IMI dia nanorina, ny fifidianana ny komity sendika voalohany dia nentina nivoaka.
Famerenana ny Jazz Dance Orchestra ny IMI nanomboka eo ambany fitarihan 'G.I. volo (amin'izao fotoana izao "Big Band ny ISTU").
Mpianatra voalohany Scientific Conference nitranga. By fotoana izany 55 mpianatra niasa tao amin'ny 5 fizarana.
Ny tsy miankina Faculty of Engineering Mechanical dia naorina, izay ihany koa ny fampiofanana notanterahina in instrumentation injeniera (mandra- 1961).
Ny laboratoara ny voanjo sy ny horonan ny fitaovam-piadiana madinika no nokarakaraina, ankehitriny mba matetika antsoina hoe ny Tranombakoky ny Small Arms.
Fiomanana amin'ny departemantan'i dia naorina ho an'ny tanora miasa avy amin'ny tanàna sy ny vohitra sy ny miaramila teo aloha mba hamerina ny fahalalana ny fandaharam-pianarana an-tsekoly mba ho mora kokoa amin'izy ireo hiditra IMI, ary mampifanaraka ny voalohany taona fianarany teny amin'ny Institute.
Ny lalana voalohany-ary-saha hazakazaka dia natao tao Kirov valan-javaboary, izay avy eo dia lasa fomban-drazana.
Post nahazo diplaoma taranja nisokatra.
Ny fifanarahana ara-toekarena voalohany teo amin'ny tantaran'ny dia nanao sonia ny Institute hanao fikarohana ara-tsiansa sy ny asa, izay nametraka ny fototry ny asa rehetra ara-tsiansa ny Institute.
Ny diplaoma voalohany ny 106 piarovana manamboninahitra nitranga tao amin'ny Sampan-draharahan'ny Miaramila.
Hariva taranja no nitombo tao IMI, izay mpanao Izhevsk orinasa no nahita fianarana (149 mpianatra avy Moto Plant irery).
Tamin'ny vanin-taona mafana ny mpianatra voalohany ekipa miasa Niainga ho "Tany Vaovao" (150 mpianatra).
Ny antokony voalohany teo amin'ny tantaran 'ny Institute dia noforonina hiady mpanakorontana.
Fiarovana diplaoma voalohany no ataon'ny injeniera mekanika manokana amin'ny teknolojia injeniera mekanika, vy-fanapahana milina sy ny fitaovana.
IMI voatendry ho mpiandraikitra ny trano fitaizana zaza kamboty tao Nylga tanàna izay nafindra toerana nandritra ny 2ND Ady Lehibe avy amin'ny blockaded Leningrad.
Votkinsk Sampana ny IMI Faculty ny hariva Courses nisokatra miorina amin'ny Fianarana Support Center Rehetra-Union Building Extramural Machine-Institute sy Votkinsk Machine-Building Technical Sekoly; 75 mpianatra injeniera mekanika manokana amin'ny teknolojia, vy-fanapahana milina sy ny fitaovana no voasoratra anarana.
Ny Departemantan'ny Instrumentation Engineering dia nanorina, izay nanjary ny fototry ny tsy miankina Instrumentation Faculty of Engineering in 1961.
Any amin'ny rehetra-Union Leninist Young fivoriana League kominista ny hevitra niakatra hanorina kianja ny ezaka ataon'ny mpianatra.
Ny Faculty ny Instrumentation Engineering nokarakarain'ny mampiray ny departemanta ny computing Machines, Elektrika Engineering sy ny Fizika.
Ny Departemantan'ny Computer Engineering nanokatra solosaina foibe miaraka amin'ny voalohany manerana izao rehetra izao computing milina elektronika jiro "Minsk-1" (ny voalohany computing milina ao an-tanàna).
Fianarana Support Center ao amin'ny Politeknika Ural Institute in Glazov nentina teo ambany fanaraha-maso ao amin'ny Institute sy amin'ny 1992 lasa ny sampana.
Fahaiza-manao Update Courses ho injeniera sy ny ara-teknika mpiasa no nokarakaraina tao amin'ny Institute. Ireto kosa no anisan'ny ho an'ny Mpitantana ny Sekoly, Ny Kilonga sy ny Sekoly Management Sekolin'ny ny injeniera vao Tafiakatra.
Fanorenana ny Academic sy Laboratory Building in Metallurg District vita (trano fianarana amin'izao fotoana izao № 2), toeram-pianarana ho avy faritany dia voafaritra (amin'izao fotoana izao Studencheskaya Street).
Ny sampana hariva ny IMI nisokatra tao an-Tanànan'i Sarapul miorina amin'ny Fianarana Support Center ny IMI.
Applied fikarohana laboratoara momba ny olana ara-toekarena ny mateza sy ny fahaiza-milina Ministeran'ny ho Machine-Building sy Fitaovana fanaovana Industry nosokafana. From 1968 ny 1992 izany no hany manorina laboratoara ao amin'ny firenena; ny laboratoara dia afaka hamokatra tsy manam-paharoa sy ny automatique rafitra mechanization amin'ny servo fandaharana aelin'ny sy ny fanaraha-maso ny rafitra sy ny asa fanaovan-gazety noho ny manorina namorona fizarana.
Scientific Research Laboratory dia naorina (SRL, tany am-boalohany dia atao hoe Zava-kendreny manokana ny Fikarohana Siantifika Laboratory).
Ny Information patanty Department of IMI dia nanorina (avy amin'ny 1996 ny 1999 dia tsy miasa, ary nosokafana indray ao 2000).
Ny Hetsika Fanafihana Brigade Komsomol dia naorina.
Nikolay Vassilievitch Talantov, DSC, Profesora, Notendrena ny Rector ny IMI.
Stadium "Burevestnik" ny IMI dia mafy nisokatra. Ary tamin'izany taona izany lalana tsara indrindra-ary an-toerana in Udmurtia, ny hany kianja izay an'ny ny Institiota; ny gazety "Komsomolskaya Pravda" Niantso azy io hoe "Izhevsk Luzhniki".
Début ny IMI ekipa ao amin'ny Club noho ny Lightheaded sy ny Quick-Witted (Valery Panagushin, Veniamin Goldfarb, Viktor Kosenko sy ny hafa).
Ny Faculty ny injeniera sy ny Toekarena ny IMI dia naorina.
Ny novakiana radio ny IMI no nokarakaraina tao amin'ny fandraisana an-tanana ny A. Okhotnikov sy N. Osipov, sportsmen ny Izhevsk Radio Club ny Kilonga Association fanampiana an-tsitrapo ny Tafika, Air Force sy ny tafika an-dranomasina izay varahina medalists ny URSS novakiana fifaninanana amin'ny onjam-peo ny fifandraisana.
Ny fanorenana ny sambo tobin'ny nanomboka.
Ny fanorenana ny ankohonan'i fananganana ny kianja vita.
Ny fiandohan'ny fananganana ny fanatanjahan-tena tobin'i IMI amin'ny renirano Kama akaikin'ny tanàna Galevo. Ny ekipa voalohany ahitana ny mpiasa 120 mpianatra ary 16 mpampianatra.
Tamin'ny fararano fetibe voalohany antoko ny mpiadina sy ny mpianatra nitranga (amin'izao fotoana izao dia ny mpianatry ny taona voalohany Antoko Welcome).
Ny laharana voalohany amin'ny gazety Institute "mpanamboatra" Navoaka. Ny gazety navoaka indroa isam-bolana.
Votkinsk Sampana ao amin'ny sampam-pianarana ny IMI hariva dia niova ho Votkinsk Sampana ao amin'ny Institute.
Fanatanjahan-tena sy fialam-boly toby teo amin'ny renirano Kama nanokatra ny vanim-potoana voalohany.
Ny mpianatra voalohany ekipa miasa ao amin'ny Repoblika naorina tao IMI. Mpianatra ny ekipa nanampy tamin'ny fanorenana Yanaul-Tsady lalamby.
Scientific Research Laboratory amin'ny milina mandeha ho azy dia naorina.
Ny fiforonan'ny ny siansa sekoly tao fandrosoana amin'ny IMI; taranaka voalohany ny mpianatra ao amin'ny sekoly niaro ny diplaoma tetikasa.
Ny fiandohan'ny fanorenana ny tifitra Gallery ambanin'ny trano akademika in Metallurg District (amin'izao fotoana izao akademika trano No 2).
Ny fanorenana ny sambo tobin'ny vita.
Tantara lalana, ny mpikambana ao amin'ny Komsomol IMI ho an'ireo miaramila tany amin'ny fitaovam-piadiana 753-rezimanta. Ara-tantara toy izany tongotra ho any amin'ny toerana misy ady sy asa voninahitry ny Sovietika olona lasa fomban-drazana. Tamin'ny voalohany ny antsasaky ny 1970-s vondrona mpikambana amin'ny Komsomol nandeha ny lalana ny Udmurtia, Nankany amin'ny Kursk Salient, ho Karelia, Volgograd sy Velikie Luki.
The Institute nandray anjara tamin'ny Spartakiad "Namana" ho an'ny Institiota avy Ural sy Siberia . Teams avy 12 ireo toeram-pampianarana ara-teknika avy any Siberia Ural sy nandray anjara tamin'ny hetsika.
Ny mpianatra avy any Udmurtia ekipa miasa nankany KAMAZ orinasa mba hanampy hanatsarana ny ponenana ny orinasa mpiasa. Izy koa nanao ny lalana ho an'ny orinasa. Ny ekipa mivoaka momba ny 204 arivo roubles.
Nikolay Alexandrovich Karpunin, DSC Notendrena ny Rector ny IMI.
Undergraduate fandaharana ao amin'ny indostria sy ny Civil Engineering nosokafana tao amin'ny Faculty of Engineering sy ny Toekarena. Ary nametraka ny fototra ho amin'ny sampam-pianarana ny Civil Engineering.
Undergraduate fandaharana in Fambolena Building novohana. Ary rehefa afaka izany ny Faculty of Civil Engineering lasa mahaleo tena.
18 Institiota ao amin'ny URSS nandray anjara tamin'ny Inter-Institute Spartakiad "Friendship".
Alexey Matveevich Lipan, DSC (amin'izao fotoana izao mpikambana ao amin'ny Akademia Rosiana ny Science) Notendrena ny Rector ny IMI.
Ny efi-boninahitra natokana ho an'ny 30faha tsingerintaona ny fandresena eo amin'ny ady Tia Tanindrazana Lehibe dia nisokatra tao amin'ny Institute.
Ofisialy voalohany fampisehoana ny mpianatra teatra ao Skits natao tao amin'ny Institute. Rehefa afaka izany, dia nantsoina hoe ny teatra IzhMechSmekh ("Smekh" dia ny teny Rosiana "hehy").
Tamin'ny taona firaketana an-tsoratra iray ao amin'ny IMI akademika zava-bita: akademika tanteraka fandrosoana amin'ny Faculty of Engineering Instrumentation dia 99.3%; 14 mahitsy-A mpianatra!
Ny filan-kevitra manokana ny fiarovana Doctorat dia nisokatra tao IMI. In nandritra ny taona maro 3 kokoa ny filankevitra dia nisokatra.
Mpianatra miasa ekipa nandray anjara tamin'ny fifaninanana ho an'ny mendrika hatao hoe taorian'ny 25faha tsingerintaona IMI.
Ny lalana voalohany-ary-tsaha mpianatra hazakazaka amin'ny fahatsiarovana ny andro Fandresena no natao teny an-dalana: Izhevsk-Ulyanovsk. Ny fomban-drazana ny lalana-ary-tsaha ho any amin'ny maherifo firazanana tanàna tany amin'ny tany URSS foana mandra- 1982. Avy eo dia velona indray ny tany 2003.
1980 - Izhevsk - Novorossiysk, ny hazakazaka dia natokana ho an'ny 35faha tsingerintaona ny fandresena ao Patriotic Ady Lehibe
Ny mpianatra tsy manam-paharoa ekipa miasa CSB (Kaominista tohina Brigade) no nokarakaraina tao amin'ny sampam-pianarana ny Civil Engineering. Ny vola rehetra Nahazo ny ekipa nalefa tany amin'ny fitaizana zaza kamboty ao Nylga.
Ny vokatry ny mpianatra asa fikarohana akademika sy nahavita fahombiazana amin'ny rehetra-Union Fampirantiana ny zavabitan'ny ny toekarem-pirenena.
79 mpandray anjara amin'ny fampirantiana avy any IMI nahazo diplaoma sy ny medaly.
Ny fanorenana ny Mpianatra Palace "manontolo" dia vita.
Ny Mpianatra Theater ny Skits "IzhMechSmekh" no nahazo ny anaram-boninahitra ny Vahoaka Theater. Ny mpitantana ny teatra dia Evgeny Stolov.
Ny fampisehoana ny Nikolay Gutorovich, nahazo diplaoma avy amin'ny sampam-pianarana ny Mechanical Engineering, mpihira, Artist voninahitra ny Rosiana Repoblika Sosialista Sovietika Federative, nitranga teo amin'ny Mpianatra Palace "manontolo".
-Pirenena Rosiana fampirantiana "automatique sy Mechanization in Machine-Building, Mpampatsiro hanina sy ny Construction "natao tao amin'ny Institute for vao voalohany. 42 toeram-pampianarana sy amin'ny sampany anankiray avy 35 tanàna any amin'ny tany Rosiana Repoblika Sosialista Sovietika Federative nandray anjara ao; teo anivon 'ny mpandray anjara dia 20 oniversiten'ny fikambanana. 269 fampirantiana dia aseho ao, 33 fampirantiana dia avy IMI, 18 tamin'izy ireo no nampidirina ao amin'ny orinasa ka namela fahavaratra 3.6 tapitrisa robla.
Rehefa mandinika ny vokatry ny Machine-Building, Mpampatsiro hanina sy ny fizarana ny fanorenana ny fampirantiana, ny mpitsara voalohany dia nanome toerana Izhevsk Mechanical Institute sy Perm Politeknika Institute. Izy ireo nahazo ny voaloham-kilasy diplaoma.
"IzhMechSmekh" nandray ny Grand Loka 'ny gazety "Mpianatra Meridian" amin'ny rehetra-Union Fetin'ny Mpianatra Theaters ny Skits tao an-tanànan'i Donetsk.
Ambany fanaraha-mason'ny V.M. Zlatkis, ny Departemantan'ny Computer Engineering nanomboka mavitrika fampandrosoana sy ny fampiharana ny fahitana rafitra amin'ny orinasa samy hafa ny Udmurtia sy ny faritra hafa eo amin'ny firenena.
Oleg Ivanovich Shavrin, DSC, Profesora, Lasa ny Rector ny IMI.
Fahasalamana sy ny Fialam-boly Center nosokafana (vonona tanteraka in 1984).
Ny Sampan-draharahan'ny patanty sy Foundation for Description ny famoronana ao amin'ny sehatra rehetra ny teknolojia no nokarakaraina mba hampiroboroboana ny fikarohana ara-tsiansa sy ny hanentana ny fampandrosoana ny famoronana. Ny Foundation lasa lehibe indrindra ao amin'ny Repoblika.
Ny filan-kevitra manokana voalohany amin'ny fiarovana dissertation doctorat dia nisokatra tao amin'ny Faculty of Engineering Mechanical. Tsy nitombo ny isan'ireo PhDs sy ny Doctors be ny siansa. Tamin'ny 1990-s ny isan'ny doctorat filan-kevitra ao amin'ny Institute nitombo mafy. Amin'izao fotoana izao dia manana ISTU 6 doctorat filankevitra ary iray Doctorat filan-kevitry.
Fizarana A ny fahatelo dia nisokatra trano akademika; cantine fitehirizana sy trano vondrona trano dia vonona ny fitrandrahana.
IMI Voatendry ny lehibe misahana ny Ministeran'ny Fanabeazana ny Rosiana Repoblika Sosialista Sovietika Federative ho an'ny fandaminana Manokana-Tanjona sy ny intensive Fampiofanana ny Manam-pahaizana manokana ny fiarovana ao amin'ny orinasa manokana Mechanical sy Instrumentation Engineering.
Namorona ny Robots Faculty dia naorina teo amin'ny fototry ny Mechanical-Teknolojia Faculty. Izany tsipika manify ny vaovao ny milina-trano fampandrosoana.
Noho ny zava-misy fa ny tanàna dia niova anarana avy Izhevsk ho Ustinov, Izhevsk Mechanical Institute no anarana ho any Ustinov Mechanical Institute.
Ny lalana sy ny tifitra Gallery nisokatra mba hitsapa fitaovam-piadiana madinika (taorian'ny zava-nitranga in-doza 1991 nitsimohan'ny Gallery nakatona).
Ny sampan 'ny Departemantan'ny Manufacturing ny milina sy rafitra nosokafana amin'ny Institution Fikarohana Siantifika sy ny Teknolojia "Fandrosoana". Io no voalohany sampan 'ny sampan-draharaha eo amin'ny sehatry ny fandaharam-Special-Tanjona sy ny intensive Fampiofanana ny Manam-pahaizana manokana.
Ho an'ny mpianatra amin'ny zava-bitan'ny siansa sy ny fikarohana asa, ny Minisitry ny Fampianarana Ambony ny URSS Nangataka IMI handamina sy hampiantrano ny rehetra-Union Fampirantiana ny siantifika sy ara-teknika mamorona amin'ny ny Tanora - XI sy ny rehetra-Union Fifaninanana "Mpianatra sy ny Teknolojia Progress - 86".
Ny fanorenana ny 2ND akademika trano sy miraiki-po ho any amin'ny fanatobiana Ski dia vita. Ny fanatanjahan-tena foibe roa gyms nisokatra tao an- 3RD trano fianarana.
Taorian'ny loza Chernobyl, ny ekipa avy any IMI miaraka amin'ny orinasa "Izhmash", SRIT "Fandrosoana" milina mpamokatra herinaratra sy Sarapul Plant nahavita mamorona ao anatin'ny herinandro radio-maso ny hovidiana mba hametraka ny milina ho an'ny fanangonana radiôaktifa potipoti-javatra ny granita.
Mpiasa ny IMI ho mpikambana ao amin'ny Vaomieran'ny amin'ny Fanekena fitsapana nandray anjara tamin'ny iraka ho any amin'ny Ekoatera (Ranomasimbe Indianina, Weather sambo "Musson") miaraka amin'ny fitaovana prototypes ny nonstandard nitombo ny mpamorona ny Faculty of Engineering Mechanical ho an'ny Komity Nasionaly amin'ny Hydrometeorology.
Ny hazo fijaliana Ski hazakazaka firenena antsoina hoe "Fanatanjahantena dia ny Masoivoho Fihavanana 'nitranga. Ny mpandray anjara amin'ny hazakazaka nanome 13 lectures, fironana asa notanterahina asa 6 village sekoly, nanome 10 fampisehoana ary 3 atrikasa momba ny fanatanjahan-tena fandaminana asa, voalamina 3 Ski fifaninanana ho an'ny mpianatra sy ny 7 lalao volley sy ny baskety in. Ny ekipa nanarona about 90 kilaometatra.
Toy ny anaran'ny tanàna dia niova indray, Ustinov Mechanical Institute niverina ny anarany - Izhevsk Mechanical Institute.
Ivan Vassilievitch Abramov, DSC, Profesora, voafidy ny Rector ny IMI.
Ny Faculty ny Toekarena nakatona sy ny Faculty of Engineering Cybernetics sy Computer Science dia naorina.
Developers ny siansa lohahevitra ao amin'ny tontolon'ny Fampahalalam-baovao sy ny Fametrahana Ireo Systems in Siansa sy ny Indostria avy amin'ny Departemantan'ny Computer Engineering (Y.V. Verkienko, V.S. Kazakov, A.D. Savinykh, K.Yu. Petukhov) dia nahazo S.I. Mosin loka.
Mpianatra avy amin'ny sampam-pianarana iray Namorona ny Robots fanovana niasa tao amin'ny orinasa sy nandefa fiara ny vola rehetra izay azony izy ireo ho voalamina ny fototra ho amin'ny fanorenana ny Tsangambato ny fandriampahalemana, miaramila in Izhevsk.
Nahazo diplaoma avy amin'ny Institute nanao dia lavitra an-tanana-nanao Yacht ny Flint Kilasy teny an-dalana Rostov-on-Don - Azov - Taganrog - Mariupol - Kerch - Feodosia.
Ny Sampan-draharahan'ny Academic ny Fomba fizahan-toetra ny Heat Machines nisokatra ambany fitarihan'ny Yu.V. Verkienko, DSC, Prof., miaraka amin'ny Institute of Applied Matematika ny Ural Division ao amin'ny Akademia Rosiana ny Science. Ny Sampan-draharahan'ny namorona ny Optical elektronika simulator ho an'ny ady iraisana izay nanaiky ny tafika Rosiana.
Ny vanim-potoana voalohany ny Repoblika fifaninanana ho an'ny Mpianatra Theater Skits "Balda" dia vita.
Ny Faculty ny Management sy Marketing dia naorina.
Ny teatra "IzhMechSmekh" nahazo ny toerana misy ny monisipaly teatra "Efa mba tanora Man".
Taorian'ny ny vokatry ny Institute fanombanana, Izhevsk Mechanical Institute nahazo ny sata ara-teknika ny oniversite ary lasa Izhevsk State University teknika - ISTU (Order ny Filohan'ny Komitim-panjakana ao amin'ny Federasionan'i Rosia tao amin'ny fianarana ambony No 484 mitondra ny datin ' 22.12.1993).
Ny Sekoly doctorat nisokatra tao amin'ny University natambatra 4 ara-tsiansa sy saha 16 specialties.
Ny voalohany solontena vahiny nitsidika an'i ISTU (manomboka ny fiaraha-miasa amin'ny oniversite alemà).
Ny Faculty ny Computer Science dia naorina teo amin'ny fototry ny ECCS Faculty.
Ny lasa State University fankatoavana.
Ny Antenimieran-doholona Academic nampiditra ny anaram-boninahitra ny boninahitra Profesora ny Izhevsk State University Technical (mitovy amin'ny Doctor Honoris Causa). Profesora boninahitra voalohany ny ISTU lasa I.V. Abramov, V.I. Goldfarb, M.T. Kalashnikov, A.A. Konovalov, A.M. Grayling, V.I. Kazachenok, O.I. Kshwrin, N.V. Azbelev. 44 ny olona no nahazo ny anaram-boninahitra hatramin'izao anisan'izany 13 solontena vahiny.
Ny Publishing House ny ISTU naorina teo amin'ny fototry ny Editorial departemantan'i sy Copy Center.
Ny siantifika sy ny Fikarohana Center for tsaina Radiosystems no nokarakaraina tao amin'ny Departemantan'ny Radio Engineering, izay taty aoriana dia niova ho Radio Engineering Design Office izay dia ara-drafitra subdivision ny Sarapul Radio Plant.
Ny Institute ny Milina no nokarakaraina teo ambany fanaraha-mason'ny Veniamin Iosifovich Goldfarb miorina amin'ny famolavolana mpianatra birao.
Ny Faculty ny Humanities dia naorina.
Ny sarin 'ny faritra Center for fizahan-toetra ny Ministeran'ny Fanabeazana ao amin'ny Federasiona Rosiana dia nisokatra mba handamina sy mitarika foibe fitiliana ny mpianatra sy ny mpangataka any Udmurtia.
Ny fanomanana Faculty dia naorina (in 1999 dia ovana hahazo Institute of Academic Fifandraisana), izay lasa iray amin'ireo mpitarika ao niaiky niara-niasa tamin'ny mpianatra sekoly ambony sy ny mpianatra ny fanabeazana mitohy arak'asa sy ny ambaratonga faharoa arak'asa fanabeazana.
Tranombakoka ny Radio Electronics sy Computer Science dia voalamina.
Rindrambaiko ny ISTU nandray anjara tamin'ny Collegiate Iraisam-pirenena Programming Contest (ICPC) eo ambany fiahian'ny ny Association for computing milina (ACM).
Ny Faculty ny Professional Pedagogics dia naorina (in 2008 dia mpikambana ao amin'ny Faculty ny Toekarena, Lalàna sy Humanities).
Ny Office International dia nokarakaraina mba mandrindra ny fiaraha-miasa iraisam-pirenena.
Fifanarahana iraisam-pirenena voalohany dia nanao sonia fiaraha-miasa eo amin'ny ISTU sy University of Pecs, Hongria.
Ny Institute ny Fampianarana mitohy arak'asa dia naorina.
Ny Faculty ny fianarana sy ny fanampiny, nahazo diplaoma teny Professional Education dia naorina.
Ny adihevitra momba ny teorika voalohany gazety "Vestnik ny Izhevsk State University Technical" Navoaka (amin'izao fotoana izao ny gazety eo amin'ny lisitry ny fitarihana nandinika gazety, ary koa ny lisitry ny teny vavolombelon'Andriamanitra Ambony Commission (BOX), ary tafiditra ao an-Rosiana Scientific Citation Index).
Ny Faculty ny Applied Matematika dia naorina.
Ny Faculty ny Quality Management dia naorina.
Ny Faculty ny fanatanjahantena dia naorina.
Sarapul sampana ISTU dia anarana ho any Sarapul Politeknika Institute (Sampana ny ISTU).
Fifohazana ny mpianatra ekipa miasa: Mpianatra Miasa ekipa Division ny ISTU "Mechan" no voalohany SWT velona indray ny antokony ao amin'ny Repoblika.
Izhevsk State University teknika dia deraina ao amin'ny Ministera misahana ny Indostria, Siansa sy ny teknolojia ao amin'ny Federasionan'i Rosia ho toy ny fikambanana ara-tsiansa.
University mpiasa nandray M.T. Kalashnikov State Award ny Repoblika Udmurt (L.A. Glgn, V.N. Ezhov, Y.A. Sadilov, I.V. Ishmulin) hitondrana fampianarana famelabelarana momba ny haino aman-jery AK-47.
Ny sarin 'ny faritra Center for Testing nandray anjara tamin'ny fanandramana rehetra-Rosiana eo amin'ny fampiharana ny fanamiana Exam-panjakana nandritra ny 11-kilasy ny mpianatra ao amin'ny sekoly ambony Udmurtia.
Ny famoahana ny gazety "Mechanik" dia nitohy indray (nijanona in 1989).
Ny Faculty dokam-barotra sy Design dia naorina.
Ny Faculty ny Mpampianatra fahaizana naorina Vaovao farany.
Ny Minisitry ny Fanabeazana sy ny Siansa ao amin'ny Federasiona Rosiana voasoratra anarana 18 nitarika fampianarana fikarohana ekipa ny ISTU izay fitondran-tena fototra fikarohana.
Ny Faculty ny Heat Engineering dia naorina teo amin'ny fototry ny Hydraulics sy Heat Engineering Department.
Ny mpahay siansa ny ISTU (M.M. Gorokhov sy I.G. Rysyak) dia nahazo ny loka panjakana ny Repoblika Udmurt ao amin'ny tontolon'ny siansa sy ny teknolojia ho an'ny maro ny asa eo amin'ny sehatry ny angovo fahombiazana.
Feo Jazz Studio "Rec.time" nokarakarain'ny Larisa sy Alexey Pismerov, Voninahitra kolontsaina mpiasa ao amin'ny Repoblika Udmurt.
Ny lalana iraisam-pirenena voalohany-ary-tsaha hazakazaka teny an-dalana Minsk Izhevsk-nitranga teo amin'ny fandraisana an-tanana ny rectors ny ISTU (Izhevsk) ary BNTU (Minsk).
ISTU no teo amin'ny anjerimanontolo voalohany izay nanao sonia ny Magna Charta Universitatum in Bologna (Italia) ary lasa mpandray anjara ny Bologna Process.
Ny Faculty Namorona ny Robots dia ovana hahazo Faculty of Advanced Technologies sy ny fiarakodia.
Ny Faculty ny Humanities dia ovana hahazo Faculty ny Toekarena, Lalàna sy Humanities.
Ny Sampan-draharahan'ny ny fandaminana sy ny asa fampianarana amin'ny mpianatra dia naorina mba hampiofanana siantifika sy ara-teknika manampahaizana, mavitrika amin'ny famoronana ny olona saina izay nanitsy ny ankehitriny ny fiainana ny toe-javatra.
Grant fifaninanana natao ho an'ny mpianatra nahazo diplaoma teny sy ny undergraduate. Ny fifaninanana dia natokana ho an'ny 100fahatsingerintaona V.P. Ostroumov, izay ny voalohany Rector ny IMI.
Fa ny voalohany, Izhevsk Radio Plant nanome Grant manokana n.a. Valery Agafangelovich Shutov (Tale Jeneralin'ny teo aloha ny fototra (1978-1992), Boninahitra Citizen ny Izhevsk) ny mpianatra izay nahavita ny ISTU niavaka vokatra amin'ny siansa sy ny fianarana asa. Ny loka Shutov dia omena ny mpianatra tsara indrindra indroa isan-taona.
Ny Forum "Education Quality-2004" (EQ-2004) natao. Ny voalohany Conference International "Technical Anjerimanontolo: Fampidirana amin'ny Eoropeana sy World Systems ny Fampianarana "no nokarakaraina tao amin'ny sehatry ny Forum. Ny hetsika tsy tapaka Isaky ny roa taona.
Fa ny voalohany, ny nentim-paharazana ny fifaninanana volley mpianatra ao amin'ny fahatsiarovana ny Yury Mineevich Merzlyakov (1947-2003) dia naorina; izy no iray amin'ireo toerana tena sy malaza indrindra ireo mpitarika teo amin'ny tantaran'ny amin'ny University.
Mpianatra Lalàna-Fampiharana Unit "Rys" dia naorina tamin'ny hetsika ny mpianatra sy ny Security Department of ISTU.
Tamin'ny fivoriana ny Eoropeana tao Bruxelles Association University ny fanapahan-kevitra no natao ho feno ny mpikambana tsirairay ISTU in EUA. ISTU lasa 11faha Oniversiten'i Rosia mba handray izany voninahitra.
Ny Forum ny undergraduate voalohany sy ireo mpianatra, nahazo diplaoma teny amin'ny ISTU nitranga. Solontenan'ny fahaizanareo, mpikambana ao amin'ny ekipa mpianatra asa sy ny filankevitry ny mpianatra hotely ary koa ny mpianatra sy ny mpampianatra 'sendika nandray anjara tamin'ny sehatra.
Ny Rector ny fandraisana ho an'ny mahitsy-A mpianatra natao, izao ny fandraisana isan-taona no natao, ary antsoina hoe "mpianatra ao amin'ny taona".
ISTU dia deraina ny Federal Space Agency (Roskosmos) ary nandray ny zo hitarika asa mifandray amin'ny asa habakabaka (vaovao fikarakarana sy ny fampandrosoana ny rindrambaiko manokana).
Egyptian-Rosiana University (NY) nosokafana akaikin'ny tanànan'i Cairo tao Badr. Rosiana mpikambana ao amin'ny Biraon'ny mpanorina ny ERU dia I.V. Abramov (Ary Rector ny ISTU) ary M.T. Kalashnikov (endrika sy fitaovam-piadiana madinika-boninahitra Profesora ny ISTU).
Ny fanabeazana sy ny Testing Center Rosiana ho toy ny Foreign Language nisokatra; dia deraina mba hizaha toetra teratany vahiny sy hamoaka mari-pankasitrahana mba hahazoana ny zom-pirenena Rosiana.
Ny Sampan-draharahan'ny, nahazo diplaoma teny dia naorina.
Team ny mpamorona ny teknolojia ny didy bimetallic faritra ho an'ny fiara manokana (akademisiana A.M. Grayling, ary ny mpahay siansa ny ISTU S.D. Solovyov, PhD sy O.I. Kshwrin, DSC) dia nomena M.T. Kalashnikov Award.
V.M. Verzhbitsky, mpampianatra ao amin'ny Departemantan'ny Applied Matematika sy Computer Science, nahazo ny fanjakana Award ny Udmurt Repoblika eo amin'ny sehatry ny boky sy gazety, zavakanto sy ny fanabeazana.
Ny tranombakoka dia nisokatra ivelan'ny trano akaikin'ny 2ND akademika fanorenana ny ISTU: enina santionany ny lehibe-fakan-tahaka toa basy (D-20-MG 152 howitzer-basy, M-46-MG 130 towed basy, M-30-MG 122 howitzer, D-48-MG 85 tanky anti-basy, S-60-MG 57 fiaramanidina anti-basy, D-30-MG 122 howitzer) dia naranty.
Ny University mifamadika ny rafitra ny fanomanana tetikasa nahazo diplaoma amin'ny fifanarahana fototra: 58 departemanta ny ISTU namorona andian-baiko ny mpampiasa mba hanao fikarohana siantifika sy ny diplaoma tetikasa noho ny orinasa.
Ny fetin'ny mpianatra voalohany gitara tononkalo "mpihira ny GaleWood" natao tao amin'ny Fanatanjahan-tena sy Fialam-boly Camp ny ISTU "Galevo".
Ny Laboratory ny Technical Physique n.a. Yu.M. Merzlyakov nosokafana. Ary nanao fanomezana lehibe ho an'ny humanitarization ny fanabeazana ao amin'ny Institute, fiovan'ny IMI ho ara-teknika amin'ny oniversite sy ny fandaminana ny licence fampianarana. Ny Faculty ny Instrumentation Engineering nanomana medaly atao hoe taorian'ny Yu.M. Merzlyakov "Fa Academic Achievements sy ny fandraisana anjara mavitrika amin'ny fiainam-bahoaka" sy ny "Nampivoatra Siantifika".
ISTU naka ny toerana voalohany ao amin'ny Repoblika fifaninanana eo amin'ny fandaminana ny asa fampianarana ao amin'ny toeram-pianarana ambony kokoa ny Udmurtia.
Boris Anatolyevich Yakimovich, DSC, Profesora, voafidy ny Rector ny ISTU.
Ny ekipa ny ISTU rindrambaiko naka ny toerana voalohany ao amin'ny XI Ural Team Mpianatra Championship in fandaharana.
Ny fanorenana ny Business Incubator ho an'ny undergraduate sy ny mpianatra sy mpikaroka, nahazo diplaoma teny vita (miaraka amin'ny faritra tanteraka ny 1000 sq.m. mety handraisana about 20 tetikasa-orinasa). Ny tetikasa 'ny zava-baovao Business Incubator dia iray amin'ireo mpandresy amin'ny fifaninanana nasionaly amin'ny tetikasa toy izany eo 40 Rosiana anjerimanontolo.
Ny fanorenana indray ny kianja filalaovam-baolina ao amin'ny Stadium "Burevestnik" dia vita. Fanekena ny Rosiana Football Union dia nanao sonia mba hamorona ny interregional fanatanjahan-tena foiben'ny zandriny baolina kitra ao amin'ny ISTU.
The 3RD manodidina Rehetra-Russian Mpianatra Olympiad amin'ny rafitra sy Machine Science natao.
Ny fifaninanana voalohany amin'ny mpianatra Video sarimihetsika "SKIF" dia fandaharana.
Six licence ary ny iray fianarana tompon fandaharan'asa ISTU dia deraina ny Central Evaluation sy fankatoavana Agency (ZEvA) ( Hanovre, Alemaina). Araka ny fanombanana ny vokatra, ny fankatoavana maharitra Commission de ZEvA nanao tsoa-kevitra fa ny fizahana rehetra fandaharana hitsena ny Eoropeana fitsipika. Ireo mpianatra rehetra izay nianatra tamin'ny fandaharana ireo dia afaka handray ny Eoropeana Fanampiny Diploma ny diplaoma amin'ny fianarana ambony.
Ny mpahay siansa ny ISTU (V.I. Goldfarb, E.S Trubachev., D.P. Gromov, A.S. Kuznetsov) dia nahazo ny Loka panjakana ny Repoblika Udmurt in Siansa sy ny Teknolojia hitondrana fampianarana sy mahafehy vaovao isan-karazany ny Ampidiro ny fanoloana fampihenana gearboxes ny taranaka vaovao ho an'ny solika sy ny entona, sy ny hery simika orinasa.
ISTU lasa mpikambana ao amin'ny Fikambanana-bahoaka Rosiana "Union Rosiana Mechanical injeniera". mpiasa, mpampianatra sy mpianatra ao amin'ny oniversite isan-taona hiaraka fikambanana ity.
ISTU ekipa nahazo medaly volamena tao amin'ny International Collegiate Programming Fifaninanana ACM-2008 tao an-tanànan'i Banff, -tokony eran'ny fanjakana Alberta , Kanada .
Ny atrikasa voalohany-olympiad amin'ny fandaharana naorina sy natao niaraka tamin'ny Lomonosov Moscow State University.
Voalohany-Rosiana rehetra fivoriana ny olana ny fanatanterahana Plan-panjakana ao amin'ny Fanofanana ny Personnel ho an'ny Enterprises ny Fiarovana Industry Complex natao. Ny mpandray anjara amin'ny fivoriana dia ny rectors ny tena nanaja Institiota fianarana ambony avy any Moscow, St. Petersburg, etona, Chelyabinsk, Perm, Samara, Krasnoyarsk sy ny mpitantana sy ny solontenan'ny orinasa lehibe Rosia .
Ny governemanta mba rafitra ho an'ny mpangataka ny fiarovana dia ampiharina specialties.
Ny fahatsiarovana takelaka napetraka ao amin'ny 2ND fanorenana ny ISTU in fahatsiarovana an'i Alexey Afanasievich Konovalov, iray amin'ireo voalohany Doctors ny Science ao amin'ny IMI, Profesora, mpikambana ao amin'ny Akademia Rosiana ny Rocket sy ny fitaovam-piadiana Siansa, Dean ny Faculty of Engineering Mechanical ny IMI (1989-1994), mpahay siansa malaza eo amin'ny sehatry ny ballistics.
Ny siantifika-methodological afovoan'i Rosiana Biathlon Union nisokatra tao amin'ny sampam-pianarana ny Fanatanjahan-tena ny ISTU.
Tompony voalohany nahazo diplaoma tamin'ny ISTU (131 olona). The University nanatitra 15 tompony fandaharana.
Ny Scientific Conference-Atrikasa "Control Teoria sy matematika Modeling" (IMS-2008) natao. Ny fihaonambe dia natokana ho Nikolay Viktorovich Azbelev, DSC, Prof., Boninahitra Profesora ny ISTU.
IHANY ekipa volley, ny tompon-daka amin'ny anjerimanontolo ekipa ny Privolzhsky Distrika Federaly, Nasaina ny "Russian Sports Association" ao Sidney mba handray anjara amin'ny nentim-paharazana "Russian Volleyball Tournament" ao Aostralia. Izhevsk ny sportsmen avy nahazo ny toerana voalohany ny fifaninanana; Nihaona ihany koa izy ireo ao amin'ny fampirantiana lalao niaraka tamin'ny ekipa voafantina ny Oniversiten'i Sydney sy Sydney University of Technology-panjakana.
Ny Faculty ny fianarana sy ny fanampiny, nahazo diplaoma teny Professional Education dia deraina ny Minisitry ny Housing sy fanorenana ny Udmurtia ary nandray ny zo hitondra fanavaozam-baovao matihanina antokony ho an'ny manam-pahaizana manokana ao amin'ny Repoblika Udmurt ao amin'ny fototry ny Self-Regulatory fikambanana ny Federaly sy Repoblikana ambaratonga.
Takela-pahatsiarovana ny Fahatsiarovana dia nisokatra tao ISTU amin'ny fahatsiarovana ny Mikhail Semenovich Gorokhov, DSC, Profesora, boninahitra mpikambana ao amin'ny Akademia Rosiana ny Rocket sy ny fitaovam-piadiana Siansa, mahazatra ny anatiny ballistics.
Ny rehetra-Rosiana siantifika sy teknika Conference "tranga ny M.T. Kalashnikov - Fusion ny Siansa sy ny Indostria "vita fanoloran-tena ho an'ny 90faha taonan'ny mpamorona natao. Ny efitrano n.a. Kalashnikov nosokafana tao amin'ny trano famakiam-boky ara-tsiansa ny ISTU.
ISTU lasa mpikambana ao amin'ny Association "Privolznsky Cluster University of Automobile Industry" izay mampiray fito anjerimanontolo ny Privolzhsky Distrika Federaly.
Academic-laboratoara fanorenana ny ISTU No 5 dia mafy nisokatra.
Ny ekipa ny mpianatra sy ny tanora ny mpahay siansa ny ISTU eo ambany fanaraha-mason'ny G.V. Lomaev, DSC (Sampan-draharaha sy ny zava-maneno teknika Quality Fanaraha-maso) nahazo ny 6 tapitrisa roubles anie amin'ny fifaninanana ny Foundation ho an'ny Fampiroboroboana ny fampandrosoana ny orinasa madinika ao amin'ny tontolon'ny Siansa sy ny Teknolojia (eo ambany fiahian'ny ny Ivan Bortnik).
Ny iray amin'ireo lehibe indrindra Fikambanana fanampiana an-tsitrapo ny Tafika, Aviation ary Fleet dia velona indray.
Ny zava-baovao amin'ny maha-olombelona Center for Programs dia nanorina sy ny showroom "Rakurs" dia nisokatra.
El'Manuscript-09-WS Scientific Iraisam-pirenena ho an'ny Tanora Sekoly natao. Ny mpandray anjara ao amin'ny sekoly dia ny lohan'ny mpahay siansa sy mpianatra avy any Rosia, Alemaina, Frantsa, ny USA, Kanada, Bolgaria sy Norvezy.
Ny fahitalavitra eo an-toerana ho an'ny vao voalohany amoahana ny vaovao isan-kerinandro fandaharana "Studencheskaya, 7", atao amin'ny oniversite ny ekipa ny fahitalavitra avy amin'ny Sampan-draharahan'ny Filazam-Fifandraisana amin'ny ISTU.
Ny roa andro voalohany misokatra Hot-Jazz Marathon natao, izay taty aoriana lasa fomba nentim-paharazana. Izany dia Jazz fety tamin'ny mpandray anjara avy any Izhevsk sy ny tanàna hafa maro ao Rosia.
Ny zava-baovao voalohany drelijiozy amin'ny Young mpahay siansa, Fanavaozana sy ny manam-pahaizana manokana ny Udmurtia nitranga. Ny mpandray anjara ao amin'ny masera mbola tanora mpahay siansa ny Izhevsk State University Technical, Izhevsk State Medical Academy, Izhevsk State Academy fambolena sy Udmurt State University.
Ny Center ny Czech fiteny sy nisokatra tamin'ny fomba ofisialy Kolontsaina. Ary naorina niaraka tamin'ny Moravian Atsimo Center for International fivezivezena (Moravian Center for International fivezivezena, JCMM). Classes dia nitarika ny mpampianatra avy any amin'ny Repoblika Tseky. Ny Center manome antokony tsy ho an'ny mpianatra ny ISTU fa koa ho an'ny mpianatra amin'ny anjerimanontolo hafa de la République.
Ny mpahay siansa ny ISTU (B.A. Yakimovich, Yu.O. Mikhailov, N / A. Koryakin) dia nahazo ny Loka panjakana ny Repoblika Udmurt ao amin'ny tontolon'ny ny Siansa sy ny Teknolojia ho amin'ny fampandrosoana ny efa mandroso ny teknolojia sy mahafehy ny famokarana ny balafomanga vatana. Lasa ihany koa ny ekipa laureates ny "Golden Idea" loka noho ny "zava-bitantsika amin'ny amin'ny sehatry ny miaramila entana Production sy ny fampiharana ny fanjakana-avy-ny-Art Technologies".
Ny atrikasa manokana ho an'ny asa fampandrosoana ny mpitantana ny famoahana lahatsoratra sy ny sampan-draharaha "ankehitriny ny Oniversite Olana Boky Publishing" Nandamina dia niaraka tamin'ny Ivan Fedorov State University of Pirinty natao tamin'ny Arts ao Moscow. Ny vokatry ny fahatelo interregional "University Boky" Fifaninanana dia nambara.
Andrey Gumennikov, mpianatra mahay, Lasa Nobel ny Rosiana Fifaninanana ao amin'ny tsara indrindra ho an'ny mpianatra asa ara-tsiansa "fahaiza-miasa mahomby angovo Technologies". Izy nahazo ny medaly ny Minisitry ny Fanabeazana sy ny Siansa ao amin'ny Federasionan'i Rosia "Fa ny tsara indrindra Scientific Work".
47faha Spartakiad "Namana" ny Ural anjerimanontolo natao tao ISTU.
Ny Faculty ny Matematika sy Voajanahary Siansa nosokafana ny fototry ny Faculty of Applied Matematika.
Ny Filan-kevitry ny Tanora ny mpahay siansa ny ISTU dia naorina tamin'ny siansa sy ny teknolojia ny fihaonambe ny mpianatra PhD, tompony mpianatra sy ny tanora mpahay siansa.
I Mpianatra Olympiad Iraisam-pirenena ao amin'ny rafitra sy Machine siansa dia fandaharana ao amin'ny ISTU taorian'ny fanapahan-kevitry ny iraisam-pirenena ny Federasiona ho an'ny Fampiroboroboana ny rafitra sy ny Machine Siansa (IFToMM); izany no voalohany anivon'ny Olympiad ny iraisam-pirenena teo amin'ny tantaran'ny Federation ity.
ISTU nampiantrano Rosiana Volleyball Championship (lahy ekipa ao amin'ny Voalohany League).
Ny efi-trano lahateny voalohany n.a. orinasa indostrialy dia nisokatra tao ISTU: V.S. Chuguevsky (Izhevsk Mechanical Plant) sy NPO "Computer".
Ny Collective Research Center ny zava-baovao teknolojia ao Material Processing novohana tany ISTU. Manam-pahaizana milaza fa ny manam-paharoa sy ny foibe ihany no ara-nofo ho an'ny nonmetallic fanodinana in Volga faritra. Ny foibe ankehitriny dia manana fitaovana teknolojia avo-- CNC milina ho kitay fanodinana, fusing fatana fandoroana dia (fitaratra fikarakarana).
Forum tanora voalohany ny Collegiate fifaninanana amin'ny fanavaozana ara-tsaina "Young taranaka - 2011" dia fandaharana. Mihoatra ny 80 undergraduate ary nahazo diplaoma teny mpianatra, tanora mpahay siansa avy amin'ny anjerimanontolo de la République sy ny manam-pahaizana manokana avy any Izhevsk orinasa nandray anjara tamin'ny forum.
On 22 Izhevsk Febroary State University Technical Nankalaza ny 60faha tsingerintaona.
Rehefa vita ny fankatoavana ny Minisitry ny Fanabeazana sy ny Siansa ary ny Governemanta ny Federasiona Rosiana, Izhevsk State University teknika atao hoe taorian'ny Mikhail Kalashnikov, ny malaza namorona ny fitaovam-piadiana madinika, ary amin'izao fotoana izao antsoina hoe Kalashnikov Izhevsk State University Technical.
Boris Anatolyevich Yakimovich, DSC, Profesora, dia voafidy indray ny Rector ny Kalashnikov ISTU.
Efitra roa vaovao nisokatra lahateny ao amin'ny laboratoara akademika-trano No 5 ny Kalashnikov ISTU miaraka amin'ny fanohanan'ny OJSC "Interregional Telecom Transit", CJSC "Rossi-Telecom" sy OJSC "Mobile Tele Systems".
Institute of Modern Technologies in Mechanical & Automotive Engineering sy mpampatsiro hanina dia naorina teo amin'ny fototry ny Faculty of Advanced Technologies sy ny fiarakodia.
Tikhonov Institute of Fampiofanana ara-batana sy ny Fanatanjahan-tena dia naorina teo amin'ny fototry ny Faculty of Sports. Ny institiota dia atao hoe taorian'ny biathlon tompon-daka avo efatra heny Olaimpika Alexander Tikhonov.
On 30 Janoary ny vaovao dobo filomanosana ny Kalashnikov ISTU nisokatra. Dia naorina teo amin'ny sehatry ny tetikasa avy amin'ny antoko "amini Edinaya Rossia" (United Russia) "500 dobo filomanosana".
On 18 Jona ny International Research Center Collective "Center ny tena toetrany Processing Technologies" no nisokatra tao Kalashnikov mafy Izhevsk State University Technical niaraka tamin'ny HTW Aalen, Zeh GmbH, Stuttgart sy MKV GmbH, Allersberg (Alemaina). Izany dia mikendry am-teorika sy azo ampiharina fampiofanana ny mpianatra sy retraining ny olona avy amin'ny orinasa misahana manokana ny galvanization sy manatanteraka mandroso tontolo iainana namana teknolojia.
Ianao ve mila iaraho midinika ny Izhevsk State University Technical ? Any fanontaniana, fanehoan-kevitra na hevitra
Izhevsk State University teknika ao amin'ny Map
Izhevsk State University Technical Hevitra
Miaraha mba hifanakalo hevitra momba ny Izhevsk State University Technical.
Financial University eo ambany ny Governemanta ao amin'ny Federasiona Rosiana Moscow
Siberia Federal University Krasnoyarsk
Izhevsk State University Technical Izhevsk
Novosibirsk State University ny Toekarena sy ny Management Novosibirsk
Herzen State University pedagojika Rosia Saint Petersburg